हिमाल खबरपत्रिका | साथी सम्झेर
'अमेरिकामै उच्चशिक्षा' ऋचा बजिमयको पनि सपना थियो। सपना पछ्याउन उनीसँग राम्रो शैक्षिक पृष्ठभूमि र लगन दुवै थियो। नभन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयमा वायोटेक्नोलोजीमा स्नातक गरिरहेकी उनी २०६२ सालमा अमेरिका पुगिन्। सपनाको सिंढी उक्लन थालिन्।
तर, यही वेला ऋचाका खुट्टा धर्मराउन थाले। हड्डी नराम्रोसँग दुख्न थाल्यो। लामो जाँचपछि निष्कर्ष निस्कियो, उनलाई हड्डीको क्यान्सरले छोएको धेरै भइसकेको रहेछ। ललितपुर, धोबिघाटस्थित घर फर्केकी उनी चैत २०६२ सालमा बितिन्।
२३ वर्षकै उमेरमा आफ्नी प्रिय स्कूले साथी गुमाउनुको पीडामा डा. दीपकसुन्दर श्रेष्ठ (तस्वीर) धेरै रन्थनिए। ऋचाका सहपाठीहरुसँग साथीलाई स्मृतिमा सधैं जीवित राख्ने उपायबारे छलफल गरे। त्यही वर्षको चैतमै 'ऋचा बजिमय मेमोरियल फाउन्डेसन' को जन्म भयो।
दीपककै नेतृत्वमा नौ वर्षदेखि यो फाउन्डेसनले 'क्यान्सर भयमुक्त समाज' निर्माणका लागि समुदायस्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। “ऋचालाई क्यान्सरले भन्दा समाजको दुर्व्यवहारले दुखाएको थियो”, दीपक भन्छन्, “त्यसैले हामीले क्यान्सरविरुद्ध लड्नैपर्छ भन्ने लाग्यो।”
सन् २०१६ सम्ममा कम्तीमा एकहजार महिलामा क्यान्सरको प्रारम्भिक जाँच गर्ने उद्देश्यका साथ फाउन्डेसनले १३ चैतमा उपत्यकामा क्यान्सरविरुद्धको साइकल र्‍याली आयोजना गर्‍यो। काठमाडौंका ७ विद्यालयमा क्यान्सर चेतनाका लागि इलिक्जर क्लब गठन गरेको संस्थाले रोगको उपचारबारे सही सूचना प्रदान गर्न निःशुल्क परामर्श सेवा पनि शुरु गरेको छ। क्यान्सर र यसको भयबाट हाम्री साथीले जस्तै कसैले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर खटिरहेका छौं”, दीपक भन्छन्।
हिट्स एफएम म्युजिक अवार्डमा उत्कृष्ट महिला पप–भोकल्स पर्फमेन्स् पुरस्कार पाउनुअघिसम्म खि्रस्मा अबिगेल (१७) धेरैका लागि नसुनेको नाम थियो। तर, उनको आवाज नै चिनारीको माध्यम बन्यो।
काभ्रेपलाञ्चोककी खि्रस्मालाई पहिलो गीत 'मेरी आमा' ले नै यो प्रतिष्ठित पुरस्कार दिलाएको हो। सानै उमेरदेखि चर्चमा गीत गाउँदै आएकी उनी दुई वर्षअघि तराई टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने 'कृपा अनप्लग्ड' मा देखिएकी थिइन्। अनप्लग्डमा उनले गाएका 'प्राइस ट्याग', 'खुला आकाश' गीत यूट्युबमा रुचाइएको थियो।
जिकल्याग सांगीतिक समूहसँग आवद्ध खि्रस्मा उपत्यकाका विभिन्न रेस्टुरेन्टहरूमा गाउने गर्छिन्। पप, ब्लुज र सफ्ट रक विधामा सहज महसूस गर्छिन्। “समूहमा काम गर्दा धेरै कुरा सिकिरहेकी छु”, उनी भन्छिन्।
संगीतमा वामे सर्दै गर्दा नै पुरस्कृत भएको बताउने खि्रस्मालाई अब भने संगीत सिक्ने मन छ। उनी भन्छिन्, “अझ धेरै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ।”
'सेता पुतली' को विश्वयात्रा
धरानका मिलन राई (३०) कागजका 'सेता पुतली' लिएर २७ चैतमा अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयको साउथ एशिया इन्ष्टिच्यूटमा पुग्दैछन्। तीन वर्षअघि महिला हिंसाको विरोधमा राजधानीमा आयोजित 'अकुपाई बालुवाटार' बाट चर्चा पाएका उनका सेता पुतली अहिले ४० देशमा फैलिइसकेका छन्। हालै बेल्जियमको ब्रसेल्समा भएको आत्मघाती हमलापछि शोकसभामा मिलनका सेता पुतली पनि पुगेका थिए।
पुतलीका अनेक रंग हुन्छन्। तर, किन सेता पुतली? मिलन स्वयंसँग यसको उत्तर छैन। उनी सेता पुतलीलाई परिवर्तनका संवाहक भन्न रुचाउँछन्। “तर; शान्ति, आशा, प्रेम, स्वतन्त्रता, एकता र सहयोगको प्रतीकका रुपमा पनि यसको प्रयोग भइरहेको छ”, उनी भन्छन्।
अमेरिका उड्नुअघि मिलन भूकम्पको एक वर्षको सम्झनामा २४ चैतमा त्रिपुरेश्वरको कालमोचनमा ९ हजार 'सेता पुतली' टाँस्दैछन्।